အမျိူးသမီး(၂)ဦး ကို လက်ပြန်ကြိုး တုပ် ရက်ရက် စက်စက်သတ်ပြီး အလောင်းဖျောက် သူကို မိပြီ – Let Pan Daily
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့နယ် တာပုံကျေးရွာအုပ်စုရှိ မတ်ချီးနုကျေးရွာအနီးကားလမ်းဘေးချုံပုတ်အတွင်း ပုတ်ပွသေဆုံးနေသော အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား သတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့သူအား လားရှိုးမြို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏
ကြိုးစားဖော်ထုတ်မှုအရ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တရားခံမှာလည်း၎င်းကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ လားရှိုးမြို့နယ် မတ်ချီးနုကျေးရွာအုပ်စု မတ်ချီးနုကျေးရွာနှင့် (၅)မိုင်ခန့်အကွာ အရှေ့မြောက်ဘက်သင်္ချိုင်းကုန်း
သွားလမ်းဝဲဘက် ချုံတောထဲတွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား ခြေလက်များကို နိုင်လွန်ကြိုးအဖြူဖြင့်တုတ်လျက် သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှီရပြီး ၎င်းတို့အနီးတွင်လည်း အနီရောင်ခေါင်းအုံး(၁)လုံး၊ အညိုရောင်စောင်(၁)ထည်၊ အနီရောင်မွေ့ယာ(၁)ခုကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်ဟု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူက
လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းသို့ လာရောက်သတင်းပို့ရာမှ စတင်ခဲ့သည်။ သေဆုံးနေသည့် အလောင်းများအား လားရှိုးမြို့မှ လူမှုကူညီရေးကားများဖြင့်လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့အပ်နှံခဲ့ပြီး ဒုရဲအုပ်သိန်းဝင်းထွန်းမှ
တရားလိုပြုလုပ်ကာ တိုင်တန်း၍ အမှု့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက်လားရှိုးမြို့မှ ပြည်နယ်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊လားရှိုးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ၊ လားရှိုးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တို့၏ အနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်ဇော်လှိုင်ထွန်း ဦးစီးပြီး နယ်မြေရဲစခန်းမှ ခေတ္တနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲ အုပ်ဟိန်းဇာနည်ထွန်းအပါအဝင်
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မသင်္ကာသူများအား စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့ပြီး မသင်္ကာသူ(၄)ဦးအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Lashio News Agecny သို့ပြောပြသည်။ ထို့သို့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ မသင်္ကာတရားခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ချစ်ကို(ခ)ပိုင်စိုးအောင် ၊အသက်(၃၂)နှစ် ယာဉ်မောင်း ရပ်ကွက်(၉)၊နယ်မြေ(၉)နေသူအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ
၎င်းသည် လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ခန့်က စ၍ မန်ဆူကားဂိတ်တွင် အဌားယာဉ်မောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် သေဆုံးသူ ဒေါ်…….မှ ပဲခူးမြို့သို့ သွားရောက်ရန်ကားဌားခဲ့ကြောင်း၊
ထို့နောက် ၎င်းတို့(၂)ဦး အလွန်အမင်းရင်းနှီးခဲ့ပြီး ချစ်ကိုမှာ အဌားယာဉ်မောင်းအဖြစ်မှ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ဖြင့်သာ ခရီးစဉ်များပြေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ထို့သို့ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုများလာချိန်တွင် ဒေါ်……. မှ ၎င်းကိုတရားဝင်လက်ထပ် ပေါင်းသင်းရန် ချစ်ကိုအား မကြာခဏပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ထို့အပြင် ဒေါ်……မှာ ချစ်ကို၏နေအိမ်အရှေ့သို့
မကြာခဏရောက်လာပြီး ဆူပူအော်ဟစ်ပြောဆိုခြင်း များလည်းရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အမှုဖြစ်ပွားမည့် ရက်မရောက်မီ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ချစ်ကိုသည် ရပ်ကွက်(၉)နေအိမ်မှတစ်ဆင့် MDY-6E/4964 Wish အမျိုးအစားအဖြူရောင်ယာဉ်ဖြင့် ဒေါ်…… နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်(၁၂)၊နယ်မြေ(၇)
ဟက်ကာလမ်းရှိနေအိမ်သို့ သွားရောက်ကာ လက်ဘက်ရည်သောက်မည်ဟု ခေါ်ဆောင်ကာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုမှ Blue Mountain တံဆိပ်လိမ္မော်ရည်(၄)ဗူးနှင့် ရေသန့်(၁)ဗူးအား ဝယ်ပြီးပြီး ဒေါ်……၏ ညီမဝမ်းကွဲ ဖြစ်သူ သေဆုံးသူနောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် နန်းလောင်ခမ်း အား ဖုန်းဆက်ကာ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်၍ ရေကန်တောင် ကန်အမှတ်(၁၄)သို့သွားရောက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ထို့နောက် ချစ်ကိုမှ သေဆုံးသူ(၂)ဦးမရှိချိန်တွင် အချိုရည်(၂)ဗူး အတွင်းသို့ အသင့်ယူဆောင်လာသည့် အိပ်ဆေး(၁၀)လုံးစီအားကြိတ် ထည့်ကာ သေဆုံးသူ(၂)ဦးအား တိုက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကားလေအေးပေးစက်နှင့် သီးချင်းဖွင့်ထားစဉ် သေဆုံးသူ(၂)ဦးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရာမှ ကားထဲတွင် အသင့်ယူဆောင်လာသည့် နိုင်လွန်ကျစ်ကြိုးဖြင့် သေဆုံးသူ(၂)ဦးအား တုတ်နှောင်ကာ ပါးစပ်များကိုလည်း
တိတ်အကြည်ဖြင့် ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ကားမှန်များ အလုံပိတ်၍ ကားစက်ရပ်ကာ ချစ်ကိုက အနီးနားတွင်လမ်းလျှောက်နေခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုသည်။
ထို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီး (၃)နာရီခန့်ကြာသောအချိန်တွင် ကားတံခါးအားပြန်လည်ဖွင့်ကြည့်စဉ် ဒေါ်……. နှင့် နန်းလောင်ခမ်းတို့မှာ အသက်မရှုတော့ပဲ ငြိမ်သက်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် အမှန်တစ်ကယ် သေဆုံးနေခြင်းရှိမရှိကို ပိတ်ထားသည့် တိတ်အားဖွင့်လှစ်ကာ ကြည့်ရှု့စဉ် အမှန်တစ်ကယ်သေဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရသည်ဟု တရားခံချစ်ကိုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ထွက်ဆိုသည်။
ထို့နောက်သေဆုံးနေသူ(၂)ဦးအား စွန့်ပစ်ရန်လူသူ အရောက်အပေါက်နည်းသည့် မတ်ချီးနုကျေးရွာကားလမ်းဘေးရှိ ခြုံပုတ်အတွင်းသို့ပစ်ထားခဲ့ကာ အလောင်းဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ကားပေါ်တွင်ပါလာသော အနီရောင်ခေါင်းအုံး(၁)လုံး၊ အညိုရောင်စောင်(၁)ထည်၊ အနီရောင်မွေ့ယာ(၁)ခုကိုလည်းလွှင့်ပစ်ခဲ့ကြောင်း၊
သေဆုံးသူအလောင်းများ တွေ့ရှိကြောင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ဟန်မပျက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ(၁၆)ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းတွင် တရားခံ၏ထွက်ဆိုချက်အရ သိရသည်။
အမှုမှ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူတရားခံ ချစ်ကို(ခ)ပိုင်စိုးအောင်အား တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် လားရှိုးနယ်မြေရဲစခန်းမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိသည်။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ………သိန်းမင်းထွန်း(လားရှိုး)/Lashio News Agency
အမြိူးသမီး(၂)ဦး ကို လကျပွနျကွိုး တုပျ ရကျရကျ စကျစကျသတျပွီး အလောငျးဖြောကျ သူကို မိပွီ
ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)လားရှိုးမွို့နယျ တာပုံကြေးရှာအုပျစုရှိ မတျခြီးနုကြေးရှာအနီးကားလမျးဘေးခြုံပုတျအတှငျး ပုတျပှသဆေုံးနသေော အမြိုးသမီး(၂)ဦးအား သတျခဲ့ပွီးအလောငျးဖြောကျဖကျြခဲ့သူအား လားရှိုးမွို့မှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၏
ကွိုးစားဖျောထုတျမှုအရ ဖမျးဆီး ရမိခဲ့ပွီဖွဈပွီး တရားခံမှာလညျး၎င်းငျးကြူးလှနျခဲ့ကွောငျး ဝနျခံခဲ့သညျဟုသိရသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ လားရှိုးမွို့နယျ မတျခြီးနုကြေးရှာအုပျစု မတျခြီးနုကြေးရှာနှငျ့ (၅)မိုငျခနျ့အကှာ အရှမွေ့ောကျဘကျသခငြ်ျိုငျးကုနျး
သှားလမျးဝဲဘကျ ခြုံတောထဲတှငျ အမညျမသိ အမြိုးသမီး(၂)ဦးအား ခွလေကျမြားကို နိုငျလှနျကွိုးအဖွူဖွငျ့တုတျလကျြ သဆေုံးနသေညျကိုတှရှေီ့ရပွီး ၎င်းငျးတို့အနီးတှငျလညျး အနီရောငျခေါငျးအုံး(၁)လုံး၊ အညိုရောငျစောငျ(၁)ထညျ၊ အနီရောငျမှယေ့ာ(၁)ခုကိုလညျးတှရှေိ့ရသညျဟု ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ(၁၆)ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက ကြေးရှာတာဝနျရှိသူက
လားရှိုးနယျမွရေဲစခနျးသို့ လာရောကျသတငျးပို့ရာမှ စတငျခဲ့သညျ။ သဆေုံးနသေညျ့ အလောငျးမြားအား လားရှိုးမွို့မှ လူမှုကူညီရေးကားမြားဖွငျ့လားရှိုးမွို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့အပျနှံခဲ့ပွီး ဒုရဲအုပျသိနျးဝငျးထှနျးမှ
တရားလိုပွုလုပျကာ တိုငျတနျး၍ အမှု့ဖှငျ့လှဈခဲ့သညျဟုဆိုသညျ။ ထို့နောကျလားရှိုးမွို့မှ ပွညျနယျဒုတိယရဲတပျဖှဲ့မှူး၊လားရှိုးခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူး ၊ လားရှိုးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး တို့၏ အနီးကပျလမျးညှနျမှုဖွငျ့ လားရှိုးနယျမွရေဲစခနျးမှူး ရဲအုပျဇျောလှိုငျထှနျး ဦးစီးပွီး နယျမွရေဲစခနျးမှ ခတ်ေတနယျထိနျးခေါငျးဆောငျ ဒုရဲ အုပျဟိနျးဇာနညျထှနျးအပါအဝငျ
ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက မသင်ျကာသူမြားအား စုံစမျးထောကျလှမျးခဲ့ပွီး မသင်ျကာသူ(၄)ဦးအား ချေါယူစဈဆေးခဲ့သညျဟု ရဲတပျဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက Lashio News Agecny သို့ပွောပွသညျ။ ထို့သို့စဈဆေးဆောငျရှကျခဲ့ရာမှ မသင်ျကာတရားခံတဈဦးဖွဈသူ ခဈြကို(ခ)ပိုငျစိုးအောငျ ၊အသကျ(၃၂)နှဈ ယာဉျမောငျး ရပျကှကျ(၉)၊နယျမွေ(၉)နသေူအား စဈဆေးခဲ့ရာ
၎င်းငျးသညျ လှနျခဲ့သော(၃)နှဈခနျ့က စ၍ မနျဆူကားဂိတျတှငျ အဌားယာဉျမောငျးအဖွဈလုပျကိုငျနစေဉျ သဆေုံးသူ ဒျေါ…….မှ ပဲခူးမွို့သို့ သှားရောကျရနျကားဌားခဲ့ကွောငျး၊
ထို့နောကျ ၎င်းငျးတို့(၂)ဦး အလှနျအမငျးရငျးနှီးခဲ့ပွီး ခဈြကိုမှာ အဌားယာဉျမောငျးအဖွဈမှ ကိုယျပိုငျယာဉျဖွငျ့သာ ခရီးစဉျမြားပွေးဆှဲခွငျးလုပျငနျးဆကျလကျလုပျကိုငျခဲ့သညျဟုသိရသညျ။ ထို့သို့ရငျးနှီးဆကျဆံမှုမြားလာခြိနျတှငျ ဒျေါ……. မှ ၎င်းငျးကိုတရားဝငျလကျထပျ ပေါငျးသငျးရနျ ခဈြကိုအား မကွာခဏပွောဆိုခဲ့သညျဟုသိရသညျ။ ထို့အပွငျ ဒျေါ……မှာ ခဈြကို၏နအေိမျအရှသေို့
မကွာခဏရောကျလာပွီး ဆူပူအျောဟဈပွောဆိုခွငျး မြားလညျးရှိခဲ့သညျဟုဆိုသညျ။ အမှုဖွဈပှားမညျ့ ရကျမရောကျမီ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ(၁၀)ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက ခဈြကိုသညျ ရပျကှကျ(၉)နအေိမျမှတဈဆငျ့ MDY-6E/4964 Wish အမြိုးအစားအဖွူရောငျယာဉျဖွငျ့ ဒျေါ…… နထေိုငျရာ ရပျကှကျ(၁၂)၊နယျမွေ(၇)
ဟကျကာလမျးရှိနအေိမျသို့ သှားရောကျကာ လကျဘကျရညျသောကျမညျဟု ချေါဆောငျကာ ကုနျစုံဆိုငျတဈခုမှ Blue Mountain တံဆိပျလိမ်မျောရညျ(၄)ဗူးနှငျ့ ရသေနျ့(၁)ဗူးအား ဝယျပွီးပွီး ဒျေါ……၏ ညီမဝမျးကှဲ ဖွဈသူ သဆေုံးသူနောကျတဈဦးဖွဈသညျ့ နနျးလောငျခမျး အား ဖုနျးဆကျကာ သှားရောကျချေါဆောငျ၍ ရကေနျတောငျ ကနျအမှတျ(၁၄)သို့သှားရောကျခဲ့သညျဟုသိရသညျ။
ထို့နောကျ ခဈြကိုမှ သဆေုံးသူ(၂)ဦးမရှိခြိနျတှငျ အခြိုရညျ(၂)ဗူး အတှငျးသို့ အသငျ့ယူဆောငျလာသညျ့ အိပျဆေး(၁၀)လုံးစီအားကွိတျ ထညျ့ကာ သဆေုံးသူ(၂)ဦးအား တိုကျခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ကားလအေေးပေးစကျနှငျ့ သီးခငျြးဖှငျ့ထားစဉျ သဆေုံးသူ(၂)ဦးအိပျပြျောသှားခဲ့ရာမှ ကားထဲတှငျ အသငျ့ယူဆောငျလာသညျ့ နိုငျလှနျကဈြကွိုးဖွငျ့ သဆေုံးသူ(၂)ဦးအား တုတျနှောငျကာ ပါးစပျမြားကိုလညျး
တိတျအကွညျဖွငျ့ ပိတျထားခဲ့ပွီး ကားမှနျမြား အလုံပိတျ၍ ကားစကျရပျကာ ခဈြကိုက အနီးနားတှငျလမျးလြှောကျနခေဲ့သညျဟု ထှကျဆိုသညျ။
ထို့ကဲ့သို့ပွုလုပျပွီး (၃)နာရီခနျ့ကွာသောအခြိနျတှငျ ကားတံခါးအားပွနျလညျဖှငျ့ကွညျ့စဉျ ဒျေါ……. နှငျ့ နနျးလောငျခမျးတို့မှာ အသကျမရှုတော့ပဲ ငွိမျသကျနသေညျကိုတှရေ့သဖွငျ့ အမှနျတဈကယျ သဆေုံးနခွေငျးရှိမရှိကို ပိတျထားသညျ့ တိတျအားဖှငျ့လှဈကာ ကွညျ့ရှု့စဉျ အမှနျတဈကယျသဆေုံးနကွေောငျးတှရေ့သညျဟု တရားခံခဈြကိုမှ ရဲတပျဖှဲ့သို့ထှကျဆိုသညျ။
ထို့နောကျသဆေုံးနသေူ(၂)ဦးအား စှနျ့ပဈရနျလူသူ အရောကျအပေါကျနညျးသညျ့ မတျခြီးနုကြေးရှာကားလမျးဘေးရှိ ခွုံပုတျအတှငျးသို့ပဈထားခဲ့ကာ အလောငျးဖြောကျဖကျြခဲ့ကွောငျးနှငျ့ကားပျေါတှငျပါလာသော အနီရောငျခေါငျးအုံး(၁)လုံး၊ အညိုရောငျစောငျ(၁)ထညျ၊ အနီရောငျမှယေ့ာ(၁)ခုကိုလညျးလှငျ့ပဈခဲ့ကွောငျး၊
သဆေုံးသူအလောငျးမြား တှရှေိ့ကွောငျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျတှရှေိ့ခဲ့သျောလညျး ဟနျမပကျြနထေိုငျခဲ့ပွီး ဇှနျလ(၁၆)ရကျနေ့ ညပိုငျးတှငျ ရဲတပျဖှဲ့မှ ချေါယူစဈဆေးခံရပွီး ပွဈမှုကြူးလှနျကွောငျး ဝနျခံခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု လားရှိုးနယျမွရေဲစခနျးတှငျ တရားခံ၏ထှကျဆိုခကျြအရ သိရသညျ။
အမှုမှ ပွဈမှု ကြူးလှနျသူတရားခံ ခဈြကို(ခ)ပိုငျစိုးအောငျအား တရားစှဲတငျပို့နိုငျရေးအတှကျ လားရှိုးနယျမွရေဲစခနျးမှ ဆကျလကျဆောငျရှကျနကွေောငျး ကနဦးသတငျးရရှိသညျ။
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ ………သိနျးမငျးထှနျး(လားရှိုး)/Lashio News Agency
ဓါတျပုံ – လားရှိုးနယျမွရေဲစခနျး